Kutarisa Yako Pamhepo Kushambadzira Mareferenzi | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 24, 2009 Chitatu, October 15, 2014 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu zvikuru zvekushambadzira pamhepo ndechekuti basa rako rakazara pachena kuti nyika ione. Tichifunga nezve izvo zvazviri, zvinoita kuti ndinetseke kuti makambani, vamiririri, uye kunyangwe hurumende yedu yedunhu iri kufunga pavanenge vachihaya rubatsiro.
Izvo zvakapusa kuita prequalify yako epamhepo kushambadzira nyanzvi:
Kana uri kutsvaga a Tsvaga Injini Optimization yakasimba, mira kutarisa! Iwo akanakisa SEO mafemu masangano ari omni-chiteshi nyanzvi, vachiziva kuti zvemukati, email, nhare, uye zvemagariro zvese zvinokanganisa yako yekutsvaga injini mhedzisiro. SEO raive dambudziko remasvomhu, kuwana mhedzisiro kubva kutsvainjini yekutsvaga iri dambudziko revanhu uye rinoda zvakawanda kupfuura mazuva ol ezita rezwi rakakosha. Kuhaya yakaipa SEO yakasimba kunogona kuparadza simba rekambani yako kwemakore - saka enderera nekungwarira kwakanyanya.
Kana uri kutsvaga a Social Media nyanzvi, tsvaga mumwe munhu anobatsira mabhizinesi senge ako kukura kwavo kusvika mune vezvenhau. Handisi kureva munhu akatenga vateveri vazhinji. Ini handireve mutauri wekutanga kana munyori ane zano rakasiyana pane rako bhizinesi. Ndiri kukuyambira kuti utore nguva online uye ubvunze kuti ndiani aripo achibatsira mabhizinesi senge ako. Vamwe veavo vandinoda chipangamazano muindasitiri havazivikanwe… asi vatengi vavo vakakwira mudenga.
Kana uri kutsvaga a Kugadzira kana Kugadzira Yakasimba rangarira kuti runako runongova ganda rakadzika nemawebhusaiti, futi! Takashanda pamwe nevatengi vakapuritsa bhajeti yavo pakambani yekushambadzira iyo yakadzima yavo yekutsvagisa renzvimbo uye yakaparadza rwizi rwavo rwezvakawanda zvinotungamira. Makambani makuru ekugadzira akakosha, asi chete kana ivo vari kuona kuti iwe unoramba uchikura mhedzisiro yako yebhizinesi, kwete kungovaka nzvimbo yakanaka kana logo.
Kana iwe uchitsvaga iyo Pamhepo Kushambadzira Agency, enda kumakambani aunofarira kutaurirana nepamhepo uye uone kuti vanoshandisa ani kushambadzira. Tarisa vanhu vane saiti yakakura, chirongwa chikuru cheemail, vari kuwana mimwe mitsva yekutsvaga uye vanoonekwa mune vezvenhau. Mune mamwe mazwi, tsvaga makambani aunoshanda nawo akakomberedzwa. Bvunza chiremba wako wemazino, bvunza yako yepanzvimbo Pizza mubatanidzwa, bvunza vatengesi vako, bvunza plumber yako… .bvunza… bvunza… bvunza. Kana iwe ukapindura kushambadziro kwavo, mikana ndeyekuti vamwe vari kupindura futi.
Usafunge kuti haugone kutenga kambani. Usafunge kuti ivo vakabatikana zvakanyanya kuti vakubatsire. Makambani makuru anozoendesa iwe kune vamwe vanogona kukubatsira kana vasina zviwanikwa kana vari kunze kwemutengo wako.
Tags: bokabranding agencybranding firmwekushambadzira agencyonline yekushambadzira agencytsvaga wekushambadzira wezanoyekutsvaga optimization yakasimbaseo yakasimbasocial marketing agencywezvekushambadzira wezvemagarirowezvemagariro media consultant